WAA MAXAY IFILADA DOOFAARKU SIDEE AYAYNA UGA DUWAN TAHAY IFILADA CAADIGA AH? « SAWNEWS NETWORK
« Xadhigjiidka Axsaabta Xuquuqbaa ku Lumeysa(1) Dr.Elmi M.Nur
Shirqoolkii oo soo shaac baxay By Mohamed Mousa »
WAA MAXAY IFILADA DOOFAARKU SIDEE AYAYNA UGA DUWAN TAHAY IFILADA CAADIGA AH?
Posted by Sawnews.tk on August 16, 2009
Ifilada doofaarku waa cudur neefqaadashada la xiriira waxayna leedahay qaybo ka mid ah fayrus laga helo doofaarka. Ma jiro daliil caddaynaya in cudurkani uu ku jiro doofaarka Ingiriiska waxayna aqoon-yahannadu baarayaan halka uu ka yimid. Ifilada doofaarka waxaa laga xaqiijiyey dhowr dal waxuuna ukala gudbayaa dadka, taasoo keeni karta waxa loo yaqaanno faafidda ifilada ee safmar ah (pandemic flu outbreak).
Ifilada safmarka ah waxay ka duwan tahay ifilada caadiga ah maxaa yeelay waa fayrus ifilo oo cusub oo ka soo baxa dadka dhakhsana ugu kala gudba dadka caalamka oo dhan. Ururka Caafimaadka ee Caalamku (World Health Organization) (WHO) waxuu si adag u ilaalinayaa kiisaska ifilada doofaarka ee adduunka si uu u fiiriyo haddii fayruskaasi uu noqon doono safmar. Maadaama uu kaasi yahay fayrus cusub, cidna isaga uma adkaysan karto waxayna dadkoo dhan halis ugu jiraan in ay kaas qaadaan. Waxaa kuwaas ka mid ah dadka waaweyn ee caafimaadka qaba iyo weliba dadka waayeelka ah, carruurta yar yar iyo dadka hore cudurro u qaba.
SIDEE AYAY IFILADA DOOFAARKU U FAAFTAA?
Fayrusyada ifiladu waxay ka kooban yihiin saxaryo aad u yar yar oo ku faafi kara dhibcaha yar yar ee sankaaga iyo afkaaga ka soo baxa marka aad qufacdo ama hindhisooto adigoon sankaaga iyo afkaaga naabkin ku qaban, dhibcahaas yar yar way faafi karaan dadka kalena waxay halis ugu jiraan in ay kuwaas neefsadaan. Haddii aad ku qufacdo ama ku hindhisooto gacantaada, dhibcahaas yar yar iyo jeermisyada ku jira waxay ka dib si fudud uga gudbi karaan gacantaada meelo kastoo adag ee aad taabato, waxayna meelahaas ku noolaan karaan muddo. Shayada maalin kaste la isticmaalo sida dhegaha albaabbada, teebabka kumbiyuutarka, telefoonnada gacanta iyo kuwa caadiga ah iyo qalabka lagu bedbeddelo telefishinka ayaa dhammaantood ah meelaha caadi ahaan laga heli karo fayrusyada ifilada. Haddii dad kale ay taabtaan meelahaas oo ay ka dib taabtaan wajigooda, jeermisyada ayaa geli kara jirkooda waxaana geli kara cudurka. Sidaas ayay dadku isugu gudbiyaan dhammaan fayrusyada hargabka iyo ifilada, oo uu ka mid tahay ifilada doofaarku.
MAXAY DAWLADAHA INGIRIISKU SAMEEYEEN SI AY ISKU DIYAARIYAAN?
Waxaannu ifilada safmar ah isku diyaarinaynay dhowr sanadood, waxuuna Ururka Caafimaadka ee Caalamku sheegay in qorshaha Ingiriisku uu ka mid yahay kuwa
ugu fiican. Inkastoo xaaladda iminku ay daran tahay, haddana waxaannu ku kalsoonaan karnaa in aannu wax ka qaban karno. Hawsha aqoon-yahannada ee baaray safmaryo hore awgeed, waxaannu iminka si aanan weligeen arag aqoon ugu leenahay daawaynta iyo sida loo joojin karo faafidda fayruska.
Waxaannu haysannaa kaydyo fiican oo ah daawooyinka fayruska ka hortaga (sida Tamiflu® iyo Relenza®) – oo ku filan si loo daaweeyo in ka badan 33 milyan oo qof (shacabka Ingiriiska nuskii), waxaanan ku talajirnaa in aannu
kuwaas kordhinno. Daawooyinka fayruska ka hortaga ma wada daaweeyan cudurka, laakiin waxay kaa caawin karaan in aad ka bogsato haddii aad qaadato 48 saacadood gudahood ka dib marka ay calaamaduhu kaa soo baxaan, iyagoo: Joojiya calaamadaha qaarkood. Waqtiga aad bugto ka yareeya qiyaas ahaan
hal maalin. Kaa yareeya halista dhibaatooyin daran oo kaaga yimaadda, sida oofwareenka.
MA JIRAA TALLAAL AAN HELI KARO?
Waqtiga xaadirka ah ma jiro. Ifilada noocan ahi lama sinna ifilada xilliyeed ee caadiga ah: waxaa ku jira fayrus cusub oo aanan hore loo arag. Tallaalka waxaa la soo saari karaa uun marka la soo ogaado asalkiisa khaaska ah, waxayna markaa qaadan doontaa dhowr bilood si loo soo saaro. Waxay dawladaha Ingiriisku heshiisyo la leeyihiin wax soo saareyaasha si aannu tallaalka u heli karno islamarka suurogalka ah ka dib marka la soo saaro.
MAXAAN ANIGU SAMAYN KARAA SI AAN LAFTIGAYGA IYO DADKA KALE UGA ILAALIYO IFILADA?
Waxa ugu fiican ee aad samayn karto si aad isku ilaaliso waxa weeyaan adigoo raaca habdhaqan wanaagsan oo aad nadaafaddaada ku ilaalinayso. Waxay taasi gargaar ka bixin doontaa in la hakiyo faafidda fayruska waxayna noqon doontaa waxa keliya ee ugu waxtar badan ee aad samayn karto si aad laftigaaga iyo dadka kale uga ilaaliso ifilada. Marka aad qufacdo ama hindhisooto waxaa gaar ahaan muhiim ah in aad raacdo xeerasha nadaafadda wanaagsan si aad uga hortagto faafidda jeermisyada: Marwalba sido naabkinno. Marwalba isticmaal naabkinno nadiif ah oo aad ku qabato afkaaga iyo sankaaga marka aad
qufacdo iyo hindhisooto. Naabkinnada qashinka ku rid ka dib marka aad hal jeer isticmaasho. Gacmahaaga in badan ku mayr saabuun iyo biyo
kulul ama saliid culid. Waxaa jira hab fudud oo aad taas ku
MIYAAN U BAAHAN AHAY WAJISHAREER?
Waxaa laga yaabaa in aad wararka ku aragtay waji shareeryo dadka loogu qaybinayo waddanada kale. Hase yeeshee, daliilka cilmibaarista laga hayo waxuu muujinayaa in waji shareeryadaas aasaasiga ahi aanay dadka ka ilaalinin in uu cudurku ku dhaco. Habka ugu fiican ee aad isku ilaalin karto ugana hortagi karto
faafidda fayrusyada ifiladu waa adigoo isticmaala naabkinno iskana tuura mayrana gacmahaaga, sida lagu soo sharxay
Xusuuso oo QABO, QASHIN KU RID, DIL.
MAXAA KALEEN SAMAYN KARAA?
Waxaa jira tallaabooyin kaloo waxtar leh oo aad iminka qaadi karto si aad isu diyaariso haddii ifilada doofaarku ay sii faafto:
Samayso koox ‘saaxiibbo ifileed’. Saaxiibbada ifileed waa deriska, saaxiibbada iyo qaraabada ku caawin kara haddii aad xanuunsato. Matalan, waxay kuu soo
qaadi karaan daawooyinka, cuntada iyo waxyaabaha kale ee aad u baahan tahay, si aanay khasab kuugu noqon in aad guriga ka baxdo haddii aad xanuunsanayso.
NB : Fadlan warbixintan meel adag ku hayso. Waxaa laga yaabaa in aad u baahato in aad dib u eegato haddii ifilada doofaarku ay sii faafto.
This entry was posted on August 16, 2009 at 11:04 am	and is filed under Articals. Tagged: Articals. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.